နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: March 2011
Aids / Donation to Myanmar Earth Quake Victims
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပဲ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်ကြောင့် ရှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်းနားမှာ နေသူတွေ အနက် တာလေ၊ မိုင်းလင်း၊ ကျကူနီရွာမှာ နေသူတွေ ငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ပြီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့သလို အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလဲ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ မိမိတို့ တစ်နိုင် အလှူငွေများ ကောက်ခံပြီး ငလျင်ဒဏ်သင့် ဘေးဒုက္ခ ရောက်သူတွေကို ကူညီဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ရည်ညွှန်း ။ ။ နိုင်းနိုင်းစနေ ရဲ့ “အလှူခံပါရစေ”
အကျဉ်းအနေနဲ့ ပြောရရင် နိုင်းနိုင်းစနေ ဘလော့ထဲက အချို့ကို တင်ပြပါရစေ။
“ရရှိတဲ့ငွေတွေကို လှူဖို့ဘယ်လို အစီအစဉ်ရှိလဲလို့ မေးမြန်းလာသူတွေကို အကြမ်းဖျင်း (လိုအပ်တာကို ဦးစားပေးပြီး) တွက်ချက်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ငလျင်ဒဏ်သင့်သူတွေ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့အရာတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ကူညီခဲ့တဲ့ စိုင်းရဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တချို့ပါ။
အဲဒီဒေသမှာ အဓိကလိုအပ်နေတာက သောက်သုံးရေ၊ မိုးကာ၊ ရွက်ဖျင်၊ စားနပ်ရိက္ခာတွေပါ။
တကယ်လို့ ရေတွေကြည်လာပြီဆိုရင် ရေကိစ္စက ပြီးသွားပါပြီ။
နောက် တခြားလှူဒါန်းသူတွေကြောင့် မိုးကာတွေ လုံလောက်ပြီဆိုရင် နေအိမ်အတွက် ကျွန်မတို့လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
အိမ်တော်တော်များများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း တော်တော်များများလည်း ပြိုပျက်သွားတဲ့အတွက် ယာယီအိမ်၊ ကျောင်း၊ တတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလို လှူဒါန်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အလှူငွေ ကောက်ခံရရှိတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ဒာလှူကကြီးသင့်သလို ကြီးသွားမှာပါ။
အဓိက လှူဒါန်းဖြစ်မယ့်နေရာက ဝေးခေါင်ပြီး လူသူအရောက်နည်းတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။
လှူဒါန်းမယ့်သူရှိပြီဆိုရင် တာချီလိတ်မြို့က စက်အား၊ လူအားနဲ့ကူညီမယ့်သူတွေက အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။
လှူဒါန်းရရှိတဲ့ငွေတွေကို နေ့စဉ် အပ်ဒိတ်ဖော်ပြသွားမှာပါ။
အလှူဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်း ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုသူများ အောက်ပါ အဆက်အသွယ်ကနေ စုံစမ်း လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ မိမိတို့ရဲ့ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီမှုများဟာ ငလျင်ဒဏ်သင့်သူတွေအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
- မြန်မာပြည်ဆိုရင် စိုင်း "soelintck@gmail.com"
- စင်ကာပူဆိုရင် ဘွိုင်းဇ် "mr.boyz@gmail.com"
- အမေရိကန်ဆိုရင် "nineninesanay@gmail.com"
- ယူကေက ဆိုရင် "redpapyrus@gmail.com" ကို ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
- PayPal အကောင့်နဲ့ လွဲချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆီကို အီးမေးလ်နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျား။ ပေးပဲလ်အတွက် ဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာကို ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
- အထက်ဖော်ပြပါ နေရာများကို လွဲပေးဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေသူများအတွက် ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။ ထပ် အကြောင်းကြားပေးပါ့မယ်။
ဒါမှမဟုတ် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းက လှူဒါန်းချင်သူများအတွက် ထိုင်းဘဏ်အကောင့်လဲ ရှိပါတယ်။
Bank - SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED. THAILAND.
NAME - MISTER U MYINT LWIN
A/C No. - 636-215770-1
ကောက်ခံရရှိလာတဲ့ အလှူငွေနဲ့ အလှူရှင်များ စာရင်းကို ဒီမှာ ဖတ်ရှုပြီးတော့ ကုသိုလ်ယူ ပီတိပွားနိုင်ကြပါပြီ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:54 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Donates, Earth, fund, Kya-ku-ni, mine lin, Myanmar, Myanmar Victims, quake, tarlay
Myanmar Earth Quake Update Image 27/03/2011 (Kya-Ku-Ni)
တာချီလိတ်က သူငယ်ချင်း ကိုစိုင်း မနေ့က ကျကူနီ ရွာကို ရောက်အောင် သွားခဲ့ပါတယ်။
လမ်းအခြေအနေက အတော်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်နေပါတယ်။ သူကြုံခဲ့ရတာတွေကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
ခရီးမဝေးပေမယ့် လမ်းဆိုးတော့ ညနေ ၅နာရီခွဲလောက်မှအဲဒီကိုရောက်တယ်။
ရွာမှာ အိမ်၁၄၀ကျော်လောက် ပျက်စီးသွားတယ်။
လူကတော 22 ယောက်သေပြီး 57 ယောက်ဆေးရုံတင်ထားရတယ်။
အဲဒီက အရမ်းခေါင် ဝေးလွန်းတဲ့အတွက် ကူမယ့်သူက ဘယ်သူမှမရောက်ဘူး။
ရွာမှာတော့ စစ်တပ်ကလာပို့ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲဖာနဲ့ ရေသန့်တွေနည်းနည်းပဲရှိတယ်။
လူကြီး 2ယောက်3 ယောက်လောက်ပဲ ရွာမှာကျန်တော့တယ်။
ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ။ ညဆို ရွာမှာမအိပ်ရဲကြလို့ တောထဲ၊ တောင်ယာတဲတွေမှာ သွားအိပ်ကြတယ်။
သူတို့လူအများသေရတာက ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှာ ဆုတောင်းပွဲကျင်းပနေချိန်မှာ ငလျင်လှုပ်လိုက်လုိ့ ဘုရားကျောင်းပြိုကျပြီး အကုန်လုံး ဒုက္ခရောက်ကုန်တာ။
အဲဒီကျောင်းမှာ ပဲ 22ယောက်လုံး တစ်ချိန်တည်းသေသွားတော့ ရွာသားတွေ သွေးပျက်ကုန်တာ။
ဆေးရုံတက်တဲ့အထဲက တစ်ယောက်ကတော့ တနေ့က ထပ်သေသွားတယ်။
နောက်သူတို့က ဗဟုသုတမရှိတော့ သူတို့ရွာ မြေကြီးထဲရောက်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်။
အဲမှာက မြေကြီးအော်သံ ခဏခဏကြားရတယ်။
ငလျင်ဗဟို(epicenter) နဲ့က ၃မိုင်လောက်ပဲဝေးတော့ တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံခဲ့ရပုံပဲ။
20°40'40.88" N 99°59'39.24" E အဲဒီ ကုဒ်ကို Google Earth ကနေကြည့်ရင်ရတယ်။
ပုံတွေကိုတော့ အောက်မှာ ပြထားပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:08 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Earth, Kya-ku-ni, mine lin, Myanmar, Myanmar Victims, quake, tarlay
Myanmar Earth Quake Update Image 26/03/2011
မနေ့က တာချီလိတ်က သူငယ်ချင်းက တာလေနဲ့ မိုင်းလင်းကို နောက်တစ်ခေါက် ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
အီးမေးလ်ထဲကို ပုံတွေ ထပ်ပို့ပေးလာပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ မိုင်းလင်းက ပုံတွေ ပါလာပါတယ်။
တဲပုတ်တွေ သက်ကယ်တဲတွေနဲ့ပုံတွေက မိုင်းလင်းက ပုံတွေပါ။
လောလောဆယ်တော့ တာဝန်ရှိသူတွေက ကူညီနေတာ တွေ့ရသလို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လာရောက် လှူဒါန်းသူတွေလဲ တွေ့နေရတယ်။
ငလျင်ကြောင့် ရေတွေ အကုန်နောက်ကျိသွားပါတယ်။
သူငယ်ချင်းကတော့ တာချီလိတ်ကနေ ဘူးကြီးတွေနဲ့ သယ်သွားပြီး ဘူးဗလာတွေကို ပြန်သယ်လာတယ်။
နောက် ရေပြန်ဖြည့်ပြီး ပြန်သွားဝေတယ် ပြောတယ်။ ဘူးသေးတွေက ရှားနေပြီ ပြောပါတယ်။
ထမင်းတွေကို မနက် ၂ နာရီလောက်က စတည်ပြီး အထုပ်ထုပ် ပြန်သွားဝေ လုပ်နေကြတယ်တဲ့။
တာချီလိတ် တစ်ဘက်ကမ်းက မယ်ဆိုင်မြို့ရဲ့ အဓိက ကုန်တိုက်ဖြစ်တဲ့ Lotus ကုန်တိုက်မှာ စားစရာတွေ ပြတ်လပ်ကုန်ပါပြီ။
နက်ဖြန်၊ သန်ဘက်ခါလောက်ကို မုန်တိုင်းတိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလကြောင့် လူတွေ ကြောက်လန့်တကြား ဝယ်နေကြပါတယ်တဲ့။
(မိုးအုံ့ရာကနေ ခုတော့ နေနည်းနည်း ပြန်ပွင့်လာပြီ ပြောပါတယ်။)
ဒီကနေ့ မနက် ၃ နာရီခွဲကလဲ ငလျင်ထပ်လှုပ်သေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ငါးစက္ကန့်လောက် ကြာပါတယ်တဲ့။ ပြင်းတော့ တော်တော် ပြင်းတယ် ပြောပါတယ်။
စင်ကာပူကလဲ စပြီး အလှူငွေတွေ ကောက်ခံနေပါပြီ။
မိမိတို့ရဲ့ အဆက်အသွယ်ကနေ တစ်ဆင့် လှူနေကြပါတယ်။
ပုံတွေကတော့ ရတတ်သမျှတွေကို သူရိုက်လာတာတွေကို တင်ပေးနေတာပါ။
များပါတယ်။ ပုံပေါင်း ၃၀ နီးပါး ရှိပါတယ်။
All photos credit to Ko Sai.
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:09 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Earth, mine lin, Myanmar, quake, tachileik, tarlay
Myanmar Earth Quake Update Image 25/03/2011
မနေ့က ရစ်ခ်ျတာစကေး ၆.၉ အဆင့်ရှိတဲ့ ငလျင်တစ်ခု ကျိုင်းတုံမြို့နယ် လွယ်မွေရွာအနီးမှာ ဗဟိုပြု လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ငလျင်လှုပ်ပြီး နောက်ပိုင်း ဒီကနေ့မှာ တာလေကို ဒုက္ခသည်များကို တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးဖို့ ရောက်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သူမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာကို မေးလ်ထဲပို့လာလို့ အားလုံးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
သူပြောကြားချက်ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
- တာလေမှာ အိမ်တွေ ပြိုတာပြို၊ ပြားပြားဝပ်တာ ဝပ်ကုန်တယ်။
- လူတွေက ၂၅ ရက်နေ့ည တစ်နာရီလောက်ကို နောက်ထပ် ငလျင်လာမယ်ဆိုလို့ ကြောက်လန့်ကြပြီး ဘော်လုံးကွင်းပြင်မှာပဲ နေနေကြတယ်။ အမိုးအကာ မရှိတာ မရှိ ဖြစ်နေကြတယ်။
- သက်ဆိုင်ရာကျိုင်းတုံဖက်က ကယ်ဆယ်ရေး အသင်းတွေ ဒီနေ့ တာလေကို ရောက်လာကြပြီး ကူညီကြတယ်။
- တာလေနားက တံတားကို ကားငယ်တွေ အသွားအလာ လုပ်နိုင်အောင် သဲအိတ်တွေနဲ့ သေချာ ပြန်ဖို့ထားတယ်။ ကားကြီးတော့ မသွားနိုင်သေး။
- တာလေက တစ်ဆင့် သွားရတဲ့ ကျကူနီ ဆိုတဲ့ ရွာမှာ နေတဲ့သူတွေ ပိုအဖြစ်ဆိုးပါတယ်တဲ့။ သူတို့တစ်တွေက တိုက်နဲ့ မနေကြပဲ သက်ကယ်တဲလေးတွေနဲ့ နေကြတာပါ။ ရွာရဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း Church ထဲကို သွားရောက် နေနေတုန်းမှာ ငလျင်က လှုပ်တော့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အဆောက်အအုံက အက်နေရာကနေ အကုန်ပြိုကျပြီး အထဲက ခိုနေတဲ့သူတွေ အကုန်သေကုန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
- တာလေမှာတော့ တစ်မြို့လုံးနီးပါး ပျက်စီးတယ် ပြောပါတယ်။
- ငလျင်ဒဏ်ခံရသူတွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြောက်လန့်မှုတွေ ဖြစ်နေပြီး စကားမေးမြန်းပြောဆိုမှုတွေမှာ အဆီအငေါ်မတည့်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
- ငလျင် မလှုပ်မီမှာ တော်လဲသံလိုလို ကြိုကြားနေရပါတယ်။ အခုလဲ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်ငယ်တွေ လှုပ်နေတာမို့ လူတွေက အဲဒီလို တော်လဲသံတွေ ကြားတော့ အမိုးအကာအောက်မှာ မနေရဲတော့ပါဘူး။ အားလုံးက ခြေမြန်တပ်ရင်း ၃၁၆ တပ်ဘေးနားက ဘော်လုံးကွင်းမှာ တဲထိုးနေကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အမျိုးအဆွေတွေ ရှိရာ တစ်ခြား မိုင်းကိုး တာချီလိတ် မှာ သွားနေကြတယ် ပြောပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများသိရင် ထပ်တင်ပေးပါမယ်။(ပုံတွေ များပါတယ်။ သည်းခံပေးပါ။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:30 AM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Earth, Myanmar, quake
Myanmar Earth Quake Update Image 27/03/2011 (Kya-K...
Myanmar Earth Quake Damages (Tarlay Town, Near TaC...
Viber : Temp Substitute for Japan ruptured telecom...